» आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन रणनीति : सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा !
२६ भाद्र २०७७, शुक्रबार १०:१२
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रले विगतमा गरिरहेको एक गल्तीबाट पाठ सिकेको छ, त्यो हो आन्तरिक पर्यटकमाथिको उपेक्षा । यसलाई स्वीकार गर्छन्, नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजण्ट्स (नाट्टा)का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईं । उनी भन्छन्, ‘अब हाम्रो घैंटोमा घाम लागेको छ, हिँजो डलर–डलर भन्दै आन्तरिक पर्यटकमाथि वेवास्ता भयो ।’
सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा !
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने पक्षमा छन् । मन्त्रालय अबको दुई वर्ष सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने पक्षमा रहेको मन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । मेरो प्रस्ताव सातामा दुई दिन (शुक्रबार र शनिबार) सार्वजनिक बिदा गरौं भन्ने छ, यसले घुमघाममा निस्कन चाहनेहरुलाई पर्याप्त समय मिल्छ, यो पर्यटन पुनरुत्थानका लागि पनि महत्वपूर्ण सावित हुनेछ ।